Box Way မှိုပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်စင်တာ VMC Series စက်ရုံ - China Box Way မှပြုပြင်စက်စက်ရုံ VMC Series ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
35 Linear Guide Way ဖြင့် 3616 Ball Screw ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာကိုတင်သွင်းခဲ့သည်
အမည်: ဒေါင်လိုက် CNC စက်ကိရိယာများ V85 ဇယားအရွယ်အစား - ၉၀၀ * ၄၅၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသည် - ၈၀၀ / ၅၀၀ / ၅၀၀ မီလီမီတာဘောလုံး ၀ က်ဘ်အရွယ်အစား - ၃၆၁၆ လမ်းညွှန်လမ်းအရွယ်အစား - ၃၅ ATC အမျိုးအစား - ၂၄ ကိရိယာလက်မောင်းအမျိုးအစားကိရိယာမဂ္ဂဇင်းကိရိယာ Chang အချိန်: 2.5 စက္ကန့်လျှင်မြန်စွာပို့လွှတ်မှု - ၄၈ မိနစ် / မိနစ်သွင်းကုန် ၃၆၁၆ ဘောလုံးဝက်အူ ၃၅ Linear လမ်းညွှန် Way Vertical CNC စက်ကိရိယာ V85 ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်များ: ၁။ ထိန်းချုပ်မှု၏ဝင်ရိုး - သြဒီနိတ် ၀ င်ရိုးသုံးလုံး၏ X၊ Y၊ Z နှင့်ဗိုင်းလိပ်တစ်ချောင်း2။ ဝင်ရိုးအရေအတွက်: X, Y, Z ကိုသုံးပုဆိန် linkage3 ။ စစ်ဆင်ရေး panel: အပြည့်အဝ function ကို CNC keybo ...
အကြီးစား Duty Belt ချိတ်ဆက်မှု CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲစင်တာ 600KG Max Load Universal
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်ကိရိယာ VMC850B X ဝင်ရိုးတန်း - ၈၀၀ မီလီမီတာ Y ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၅၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံချိတ်ဆက်မှု - ခါးပတ်ဆက်သွယ်မှုဗိုင်းလိပ်တံကျုံ့ခြင်း - BT40 ၄၅ °မြန်မြန်ဆန်ဆန် - ၁၀ မီတာ / မိနစ်အမြင့်ဆုံးအလေးချိန် - ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်ခါးပတ်ချိတ်ဆက်မှု BT40 ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက်စက်ကိရိယာ VMC850B 600KG Max Load လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ CNC ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား VMC850B သည်ထိုင်ဝမ်မြန်နှုန်းမြင့်ဗိုင်းလိပ် ၈၀၀၀rpm.2 နှင့်အတူဖြစ်သည်။ VMC850B သည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသော X, Y၊ Z ပုဆိန်များပေါ်တွင်လမ်းညွှန်လမ်းညွှန်များနှင့်အတူရှိ၏။ စက်တစ်ခုလုံးသည်ပိတ်ထားသောအကာအကွယ်များဖြင့် ...
အကြီးစား Span ရပ်တိုင်ကော်လံဒေါင်လိုက်စက် Center က 15kw 6000rpm BT50 ဗိုင်းလိပ်တံ
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1890 စားပွဲအရွယ်အစား: 2000 * 900mm X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - 1800/900/680mm ဗိုင်းလိပ်တံ: BT50 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: ဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲအကြား 15kw အကွာအဝေး: 160-840 Mm Net Weight: 13500kg Max Load: 1600kg 15kw 6000rpm BT50 ဗိုင်းလိပ်တံဒေါင်လိုက် CNC Machinng Tools များ VMC1890 လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ ခက်ခဲသောရထားလမ်းအမျိုးအစားဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရားအတွက်စက်ကိရိယာ၏လမ်းညွှန်ရထားလမ်းများသည်နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်သည်။ စက်အခြေသည်သေတ္တာအမျိုးအစားဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးကြီးမားသော span stand column နှင့်ညှိနှိုင်းသည်။
1000kg Load Capacity ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ, 3.5s CNC ဒေါင်လိုက်ခုံပြောင်းခြင်း
အမည်: ဒေါင်လိုက်စီဒီစီစင်တာ VMC1270 ဇယားအရွယ်အစား - ၁၃၆၀ * ၇၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၂၀၀ / ၇၀၀ / ၆၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: 11-15kw ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 45 ° Spindle နှင့် Table ကြားရှိအကွာအဝေး: 150-750 Mm အကွာအဝေး ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ကော်လံ: 785 Mm Max Load: 1000kg 1000kg Load Capacity Vertical Machining Centre VMC1270 BT50 45 ° SpindleQuick အသေးစိတ်အချက်များ - 1. စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံစက်များနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများသည်တင်းကျပ်သောသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ ..
အိပ်ယာအမျိုးအစားဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ, 11kw ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ CNC ဒေါင်လိုက်စက်ကြိတ်စက်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1160 ဇယားအရွယ်အစား: ၁၃၀၀ * ၆၅၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၁၁၀၀ / ၆၀၀ / ၇၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: 11kw ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT40 ၄၅ ဒီဂရီဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲကြားအကွာအဝေး - ၁၁၀-၈၆၀ Mm Spindle နှင့်ကော်လံကြားအကွာအဝေး : 690 Mm Max Load: 1000kg 1 Ton Max Load Load Vertical CNC Machine Center VMC1160 11kw Spindle Motor Quick details: ၁။ VMC1160 China CNC ဒေါင်လိုက် 3Axis စက်ကြိတ်ခွဲစက်သည်စက်ယန္တရား၊ လျှပ်စစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောတိကျသောစက်ကိရိယာတစ်ခု ...
မြန်နှုန်းမြင့်ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ၊ ၁.၆ တန်အလေးချိန်စွမ်းအား CNC ခုံစက်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရား VMC1890 X ဝင်ရိုးတန်း - ၁၈၀၀ မီလီမီတာ Y ဝင်ရိုးတန်း - ၉၀၀ မီလီမီတာ Z ဝင်ရိုးတန်း - ၆၀၀ မီလီမီတာစက်အလေးချိန် - ၁၃၅၀၀ ကီလိုဂရမ်တင်နိုင်သည့်ပမာဏ - ၁.၆ တန်လျှောက်လွှာ: မှိုအရောင်များကိုလုပ်ခြင်း - စံဘားဝက်အူများသည် NSK ၏တိကျမြင့်မားသောထောင့်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်သောမှို VMC1890 ဒေါင်လိုက် CNC Machinng Tools များ ၁.၆ တန်အလေးချိန်စွမ်းဆောင်ရည်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ၁။ 3D-CAD နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောတောင့်တင်းသောစက်ကိရိယာတည်ဆောက်ပုံကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဗဓေလသစ်စည်သဲမှို ...
၁.၅ တန်အလေးချိန်ဒေါင်လိုက်စက်ဒေါင်လိုက်စက်၊ ၆၀၀၀rpm ဒေါင်လိုက်စီဒီစက်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1580 ဇယားအရွယ်အစား: ၁၇၀၀ * ၈၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၁၅၀၀ / ၈၀၀ / ၇၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၆၀၀၀rpm ပေဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ဇယားကြားအကွာအဝေး: ၁၇၀ - ၈၇၀ မီလီမီတာမီတာအသားတင် - ၁၂၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အများဆုံးတင်ဆောင်သည့်ဝန် - ၁.၅ ကီလိုဂရမ် ၁.၅ တန် ၁၀၀ တန် MaxC CNC စက်စင်တာ VMC1580 BT50 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁ ။ အလယ်အလတ်အရွယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်မှိုများပါ ၀ င်လျှင်ဒေါင်လိုက်စီဒီစီစက်၏ဗဟိုကိုအဓိကအသုံးပြုသည်။ ပုံသေတပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုသည်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တူးခြင်း၊ ၂ ။
မာကြောသောသံမဏိ Casting ဒေါင်လိုက်စင်တာစက် 1300mm X Axis Travel
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1370 ဇယားအရွယ်အစား - ၁၄၀၀ * ၇၁၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၃၀၀ / ၇၀၀ / ၆၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ - 15kw ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 ၄၅ °ဗိုင်းလိပ်နှင့်စားပွဲကြားအကွာအဝေး - ၁၅၀-၈၀၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၁၀၃၀၀ ကီလိုဂရမ် ဝန် - 1000kg 15KW BT50 ထိုင်ဝမ်ဗိုင်းလိပ်စက်ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1370 1300mm X Axis TravelQuick အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - 1.VMC1370 သည်မြန်နှုန်းမြင့်စက်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်ကိုကြိတ်ခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းနှင့်တူးခြင်းကဲ့သို့သောစက်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ..
မှိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်မြင့်မားသော - မာကျောသောဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ၊ CNC စက်စက်
၃ Axis: Square Way X Axis ခရီးသွားခြင်း - ၁၂၀၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၇၀၀mm Z ဝင်ရိုးတန်း - ၆၀၀mm အမြန်နှုန်း - ၁၅/၁၅/၁၂ M / min ဖြတ်တောက်ခြင်း - ၈ မီတာ / မိနစ်ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၈၀၀၀rpm လျှောက်လွှာ။ 1. X, Y, Z ပုဆိန်ဆလိုက်လမ်းမီးငြိမ်းသတ်ခြင်းနှင့် rail.2 မှိုမှ fixed နေကြသည်။ မြင့်မားသော - တင်းကျပ်စက်ကိုယ်ထည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကို met.3 နိုင်ပါတယ်သေချာ။ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဗိုင်းလိပ်တံ၊ ဗိုင်းလိပ်တံ၊ ဘောလုံးဝက်အူ၊ linear slide way, tool မဂ္ဂဇင်း၊
မှိုပြုပြင်စက်ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ, BT40 45 °ဗိုင်းလိပ်တံ VMC ခုံစက်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC650 စားပွဲတင်အရွယ်: ၈၀၀ * ၄၂၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်းခရီးသွားခြင်း - ၆၅၀/၄၀၀ / ၄၈၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ၇.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT40 ၄၅ °ဗိုင်းလိပ်တံအမြင့်ဆုံး Torque: ၃၅.၈ မိုင်တိကျမှု - 0.008 Mm လျှောက်လွှာ: မှိုလုပ်ခြင်း 600kg Max Load VMC650 ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာသတ္တုမှိုပြုလုပ်သည့်စက်ကိရိယာများအမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ၁။ ထိုင်ဝမ်၏မြန်နှုန်းမြင့်၊ တိကျမှု၊ မြင့်မားသောမာကျောမှုတံစို့ယူနစ်၊ axial နှင့် radial bearing capacity 8,000rpm အထိအများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ၂ ။
နိမ့်ပွတ်တိုက်အားကြီးသောဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲစင်တာတွင်ဗိုင်းလိပ်နှင့်ကော်လံအကြားအကွာအဝေး ၆၀၀ မီလီမီတာ
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1060 ဇယားအရွယ်အစား - ၁၃၀၀ * ၆၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ၁၀၀၀ / ၆၀၀ / ၆၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: 11kw Spindle Taper: BT40 Spindle နှင့် Table ကြားရှိအကွာအဝေး - ၁၈၀-၇၈၀ Mm Spindle နှင့်ကော်လံအကြား - ၆၀၀ Mm Max Load: 800kg 800kg Max Load Vertical CNC စက်စင်တာ 11KW BT40 ဗိုင်းလိပ်တံ VMC1060 လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ CNC ဒေါင်လိုက်စက်ယန္တရားဒေါင်လိုက်စက်၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ 2. အထွေထွေဒေါင်လိုက်စက်မှအမွေဆက်ခံခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း ...
45KVA စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်စွမ်းရည်ဒေါင်လိုက်ကြိတ်ခွဲစင်တာ 6000Rpm ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ဝင်ရိုး ၄ ခုပါ ၀ င်သည်
အမည်: ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ VMC1690 ဇယားအရွယ်အစား - ၁၈၀၀ * ၉၀၀ မီလီမီတာ X / Y / Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသွားလာခြင်း - 1600/900 / 680mm ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - 6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: BT50 Spindle နှင့် Table ကြားတွင်အကွာအဝေး - 160-840 Mm Net Weight: 13200kg Max load: 1600kg 1600mm X Axis Travel Vertical CNC Machine Tools VMC1690 BT50 ထိုင်ဝမ်ဗိုင်းလိပ်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာသံမဏိမြင့်မားခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတည်ငြိမ်မှု၊ ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက်စက်ကိရိယာ၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ A type ၏အောက်ခြေရှိကော်လံ ...